Ciyaar saaxiibtinimo oo lagu soo gaba gebeeyay Kismaayo+Sawirro – Radio Muqdisho
Ciyaar saaxiibtinimo oo lagu soo gaba gebeeyay Kismaayo+Sawirro
Nadiga kubada cagta Comsed Football club Gaalkacyo Ayaa Soo gabagabeeyaay Ciyaarihi saxiibtinimo ay la Qaateen naadiyaasha heerka koowad ee Jubbaland Kismaayo.
Muddada ay kooxda ku sugneyd magaalada Kismaayo,waxaa ay ciyaaro saaxiib-tinimo la qaadatay kooxaha heerka koobad ee ka dhisan magaalada Kismaayo,iyadoo marka guulo wanagsan ay ka gaareen dhamman ciyaari ay la qaateen kooxaha kubadda cagta ee Kismaayo.
Guddoomiyaha kooxda kubadda cagta Comsed,Cabdiqani Khalif Carabay oo ka warbixiyay safarkooda ay ku joogan Jubbaland,waxuu sheegay inay soo gaba-gabeeyeen dhamman ciyaarihii saaxibtinimo ee ay u tageen magaalada Kismaayo.
“Waxaan soo gaba-gabeynay dhamman ciyaarihii saaxibtinimo ee an maalmahan la qaadaneyn kooxaha heerka koobad ee ka dhisan magaalada Kismaayo,”ayuu yiri guddoomiya Carabey
”Guul wanagsan ayaan gaarnay muddada aan joognay Kismaayo,waana mid na farxad-galinaysa inan guul wanagsan gaarno soona bandhigno ciyaar wanasgan oo ay ku farxaan dad weynihii ka soo qeebgaalay ciyaarihi Comsed aan la ciyaarnay nadiyasha heerka koowaad ee Jubbaland-Kismaayo,”ayuu intaasi raaciyay hadalkiisa.
Cabdiqani Carabay guddoomiyaha Comsed,waxuu ammaanay usoo jeediyay macallinka kooxda,Ilyaas Abdinuur iyo dhamman ciyaartoyda,isagoo marka sheegay inay muujiyeen karti iyo ciyaar wanagsan
“Annaga waxaa na farxad-galinaysa kooxda Comsed inay tahay horseedka Isboortiska Puntland, safarkana waa markii labaad oo an banaanka ku ciyaareyno koox kalana sida wali ma aysan sameyn,”ayuu yiri Carabey.
Dhinaca kale, waxaa dhawaan la filaya madaxweynaha Jubbaland,Axmed Madoobe inuu maamulka iyo ciyaartooyda kooxda Comsed ku casuumo aqalka madaxtooyadda,maaddama kooxdan ay noqotay kooxdii ugu horreeyay ee ciyaaro saaxibtinimo ku timaada magaalada Kismaayo.
Inta ay joogan Kismaayo,waxaa kalo ay la kulmi doonan kooxaha kale ee ka dhisan magaalada Kismaayo iyo maamulka ciyaaraha Jubbaland.
Kooxo hubeysan oo dil u geystay Guddoomiyihii ururka Haweenka Gobolka Mudug